Frenzo Halloween Partyမှာ ဘယ်ဝတ်စုံနဲ့ကဲရမလဲဆိုတာ ခေါင်းစားနေတဲ့စိုင်းစိုင်း – Cele Gabar
Frenzo Halloween Partyမှာ ဘယ်ဝတ်စုံနဲ့ကဲရမလဲဆိုတာ ခေါင်းစားနေတဲ့စိုင်းစိုင်း
အခုဆိုရင် အနောက်တိုင်းမှာကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ဟောလိုးဝင်းနေ့ကိုနီးကပ်လို့လာပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီအလေ့အထလေးကကူးစက်လာပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ဟောလိုးဝင်းနေ့မှာတော့ သရဲပုံစံအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ကြပြီးတော့ ပါတီတွေလုပ်လာကြပါပြီ။ဟောလိုးဝင်းနေ့ကတော့ အောက်တိုဘာလ(၃၁)ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းကလည်း Frenzo Halloween Partyမှာဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာခေါင်းစားနေပါပြီနော်။စိုင်းစိုင်းကတော့ ဒီနှစ်မှစတင်ကျင်းပတဲ့ Wonder Festival Yangon ပွဲရဲ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ညမှာ Frenzo Halloween Party မှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူကဲမှာပါ။ဒီပွဲမှာဝတ်ဖို့ကို ခေါင်းစားနေတဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ် My Day မှာ”What shouls I wear???” ဆိုပြီး တင်ထားပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီပွဲမှာတော့ စိုင်းစိုင်းနဲ့အတူ Frenzo အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ ဘန်နီဖြိုး၊အမရာဘုန်း၊Snare နဲ့ G Fatt တို့တွေကလည်းအတူဖျေ်ာဖြေကြမှာပါ။ဒီပွဲကိုလာရောက်ကြမယ့်ပရိသတ်တွေကိုလည်း ဟောလိုးဝင်းစတိုင်တွေပြင်ဆင်ဖို့ကိုလည်းပြောထားပါသေးတယ်။စိုင်းစိုင်းလိုပဲ ဟောလိုးဝင်းဝတ်စုံဝတ်ပြီး အပြတ်ကဲဖို့အတွက်ရင်ခုန်နေကြတဲ့သူတွေရှိလားနော်…။
Source : SaiSaiKhamHlaing
Frenzo Halloween Party မွာဘယ္ဝတ္စုံနဲ႔ကဲရမလဲဆိုတာ ေခါင္းစားေနတဲ့စိုင္းစိုင္
အခုဆိုရင္ အေနာက္တိုင္းမွာက်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ေဟာလိုးဝင္းေန႔ကိုနီးကပ္လို႔လာပါၿပီ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီအေလ့အထေလးကကူးစက္လာၿပီလို႔ဆိုရမွာပါ။ေဟာလိုးဝင္းေန႔မွာေတာ့ သရဲပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပင္ဆင္ၾကၿပီးေတာ့ ပါတီေတြလုပ္လာၾကပါၿပီ။ေဟာလိုးဝင္းေန႔ကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕နာမည္ႀကီးပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ စိုင္းစိုင္းကလည္း Frenzo Halloween Partyမွာဘာဝတ္ရမလဲဆိုတာေခါင္းစားေနပါၿပီေနာ္။စိုင္းစိုင္းကေတာ့ ဒီႏွစ္မွစတင္က်င္းပတဲ့ Wonder Festival Yangon ပြဲရဲ႕ဒုတိယေန႔ျဖစ္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔ညမွာ Frenzo Halloween Party မွာပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူကဲမွာပါ။ဒီပြဲမွာဝတ္ဖို႔ကို ေခါင္းစားေနတဲ့အေၾကာင္းကို သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္ My Day မွာ”What shouls I wear???” ဆိုၿပီး တင္ထားပါေသးတယ္။
အဲ့ဒီပြဲမွာေတာ့ စိုင္းစိုင္းနဲ႔အတူ Frenzo အဖြဲ႕သားေတြျဖစ္တဲ့ ဘန္နီၿဖိဳး၊အမရာဘုန္း၊Snare နဲ႔ G Fatt တို႔ေတြကလည္းအတူေဖ်္ာေျဖၾကမွာပါ။ဒီပြဲကိုလာေရာက္ၾကမယ့္ပရိသတ္ေတြကိုလည္း ေဟာလိုးဝင္းစတိုင္ေတြျပင္ဆင္ဖို႔ကိုလည္းေျပာထားပါေသးတယ္။စိုင္းစိုင္းလိုပဲ ေဟာလိုးဝင္းဝတ္စုံဝတ္ၿပီး အျပတ္ကဲဖို႔အတြက္ရင္ခုန္ေနၾကတဲ့သူေတြရွိလားေနာ္…။
“မိခင်ကိုဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်လေးကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခုမှာထည့်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရွှေထူး”
ဇာတ်ကားအသစ်များနဲ့အတူ မဒီလေးတွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ တက်သစ်စမင်းသားချော(၃)ဦး
“စိုးစန္ဒာအပေါ် ပရိသတ်တွေအားပေးကြမ်းပုံကိုပြောပြလာတဲ့ ခြူးလေး”